I-Old School SELF CONTAINED Apartment
Ukusabela ku-Covid-19 izinyathelo ezengeziwe zokuphepha nokukhucululwa kwendle ziyasebenza kulesi sakhiwo. Isibulali magciwane sezandla sizotholakala ezivakashini emnyango. Ukungena nokuphuma ngaphandle kokuthinta kuyatholakala kodwa sisendaweni uma usizo ludingeka (ngokulandela umthetho wamamitha angu-2 wokuqhelelana komphakathi).
Leli yifulethi elibanzi nelesimanje, eligcwele ukukhanya kwemvelo elinendawo yokungena yangasese kanye nezindawo zokupaka ezi-3 ezinikelwe khona kanye ngaphandle komnyango. Ifulethi lisanda kulungiswa kabusha futhi lafakwa sezingeni eliphezulu elinekhaya elisuka kuntofontofo yasekhaya. Ukushisisa okuphakathi kwegesi, i-fiber wifi yamahhala, itafula lokudlela ekhishini (iminyango yepatio esuka ekhishini ingene endaweni yevulandi yangasese) nendawo yokuhlala eyanele ukuze uphumule futhi ubukele i-smart TV yethu engu-40 inch (Netflix and On demand inc). Kunamakamelo amathathu okulala, amabili alingana nenkosi enye iwele. Ikhishi linayo yonke ikhithi edingekayo enezengezo zomshini wekhofi we-nespresso kanye nomshini wokuwasha izitsha.
4.95(110 okushiwo abanye)
4.95 · 110 okushiwo abanye
Kungakapheli nemizuzu eyi-15 uhamba ibanga ukusuka enkabeni yedolobha i-Aberdeen, i-Aberdeen Sports Village kanye neNyuvesi kanye nolwandle lwase-Aberdeen, isisekelo esihle uma ufisa ukuhlola yonke into i-Aberdeen engayinikeza.
Ngizotholakala ukuze ngihlangane futhi ngibingelele zonke izihambeli ukuze ngikwazi ukugcina ibanga eliphephile uma kudingeka. Ngihlala esizeni futhi ngingathintwa noma nini ngeselula yami uma izivakashi zinezidingo ezengeziwe.